စိတ်ကူးတေးသီ: တောင်ယာ ရိုက်ကွင်း
Posted by wai lin Tun at 6:42 PM Labels: အမှတ်တရ
ကဗျာကတော့ ကောင်းလိုက်ချက်... လွှတ်ကောင်းပဲ...
အရမ်းကောင်းတဲ့ ကဗျာလေးကို ဖတ်ခွင့်ရတာ ကျေးဇူး
ရူပက အင်္လကာ တယ်လဲ မြောက်ပေသကိုး၊ ကဗျာဆရာများ ဖမ်းစားယင် ရွာက ကြက်တွေ ကုန်ရောဆိုပဲ ဟဲဟဲ နောက်တာ။
ကဗျာလေးက..ချစ်စရာ ပြုံးစရာလေး။း)
great! i just wanna know what year this poet wrote it and when this one came out, to compare these days' LP! 'cause this poem isabranch of LP. may be pre-LP in burmese way!
ကဗျာလေးက ရိုးရိုးလေးနဲ့ ဆန်းနေတယ်…
ကဗျာကောင်းလေး ဖတ်ရင်း ကူးသွားတယ်ဗျ
ဘယ်သူကဗျာလဲဖြစ်ဖြစ် ဖတ်ခွင့်ရတာကိုဘဲ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ရေးသူကော့ တင်သူကော့